"ဒေသခံရောက်ရှိနေခြင်း" လှည့်စားဘို့မကျဘူး Martech Zone
သောကြာနေ့, မေလ 2, 2014 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 6, 2014 Douglas Karr
ကျွန်တော့်ဖုန်းကတစ်နေ့လုံးမြည်နေတယ်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်များနေစဉ်ကျွန်ုပ်စားပွဲပေါ်၌ထိုင်။ ဖွင့်ထားသည်။ ဖုန်းမြည်လာသောအခါကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်ပြီး317ရိယာကုဒ်နံပါတ် ၃၁၇ ကိုမကြာခဏခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ဤနံပါတ်သည်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များ၌မရှိသောကြောင့်ထိုသူသည်ငါ့ကိုမည်သူခေါ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်အဆက်အသွယ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ဖြင့် - တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်း LinkedIn တို့ နှင့် အမြဲတမ်း... ငါငါ့ကိုအများကြီးခေါ်ဆိုလူတိုင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်။
ဒါပေမဲ့ဒီဟာမတူဘူး။ ဤသည် 317 spoofing တစ်ခုအပြင်ထွက်အရောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် codeရိယာကုဒ် ငါဖုန်းကိုကောက်ယူငါ့ကို၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုကြိုးစားတိုးတက်စေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၊ ပြင်ပအရောင်းကျွမ်းကျင်သူနှင့်တည်ထောင်သူဘီလ်ဂျွန်ဆင်နှင့်စကားပြောရာတွင် အရောင်းအဝယ်ဒါကိုလူသိများတယ် ဒေသခံရှိနေခြင်း ၎င်းသည်အပြင်ထွက်ခေါ်ဆိုမှုနည်းပညာ၏နောက်ဆုံးပေါ်အကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်သည်။
ဒေသခံရှိနေခြင်း ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးထွားလာသည် ... ဒါ့အပြင်ငါ့အမြင်အတွက်လှည့်စားခြင်းနှင့်မိုက်မဲ။ ငါ RingDNA ကိုအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားဘူး - သူတို့ကဒီဖြေရှင်းချက်ကိုရောင်းတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောရောင်းသူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Youtube မှာဗွီဒီယိုတစ်ခုတွေ့ခဲ့တာ။ RingDNA ဗွီဒီယိုသည်အဖြေသို့မဟုတ်ပြန်လာသည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရေအတွက်ကိုညွန်ပြနေစဉ်၎င်းသည်ဤလှည့်စားသောနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏ရောင်းချမှု၏ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Account ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ Sr ။ မန်နေဂျာ Doug Hansen အလှည့်, ယခင်ကသူတို့ရဲ့မွှမ်းတင်ခဲ့သောသူတစ် ဦး ရောင်းချသူထံမှဖုန်းခေါ်ကောက်ယူ ဒေသခံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစွမ်းရည်။ ချက်ချင်းပဲသူကသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိထားပေမဲ့လည်းရောင်းသူရဲ့သမာဓိကိုသူစဉ်းစားမိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ရှာဖွေခြင်းအပါအ ၀ င်အရောင်းအနှစ် ၃၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီး၊ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်ကြိုတင်ခေါ်ယူမှုများပြုလုပ်ရန်မည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်များကိုလည်းစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ငါ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုနားလည်နေစဉ် ဒေသခံနံပါတ်များ အလားအလာတစ်ခု၏ခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီပေါ်လာရန်ငါမကြာခဏလုပ်ခြင်းသည်သူတို့လမ်းလွဲသွားသည့်အလားအလာကိုအကြံပေးသည်ကိုတွေ့ရပြီး၎င်းတို့သည်ကောက်ယူခြင်းနှင့်အစပိုင်းတွင်ချိုးဖောက်ရန်လိုသည့်အဆိုးမြင်မှုများကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသည်ဟုတွေ့ရှိသည်။ ဤနည်းစနစ်များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအလားအလာကိုရောက်ရှိရန်ထိရောက်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းကိုအားနည်းစေခြင်းတို့ကိုလည်းဖော်ပြသည်။
Doug ကကောင်းကောင်းပြောခဲ့တယ်။ သင်သည်တူညီသောsameရိယာကုဒ်နံပါတ်ဖြင့်ခေါ်ဆိုသောအခါတုန့်ပြန်မှုနှုန်းတိုးများလာလျှင်ပင်သင်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်၎င်းနှင့်အတူတိုးတက်နေသည်ဟုမထင်နိုင်ပါ။ မင်းရဲ့လှည့်စားမှုအောက်ကနေစတင်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာရောင်းအားသံသရာတစ်ခုလုံးကိုအန္တရာယ်မကျရောက်ဘူးဆိုတာလည်းမယုံနိုင်ဘူး။
ယုံကြည်မှုနှင့်စစ်မှန်မှုသည်ရောင်းချမှုတိုင်းအတွက်သော့ချက်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုareaရိယာကုဒ်များ spoofing အားဖြင့်သူတို့ကိုမစွန့်စားပါနဲ့!
မေလ 5, 2014 မှာ 9: 11 AM
ဟုတ်တယ်၊ ဒါက သူ့ရဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ကျော်လွန်သွားခဲ့တဲ့ လှည့်ကွက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ လွန်ခဲ့သည့် 18 လက ၎င်းသည် ပထမအကြိမ် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် ကျွန်ုပ်အား အရူးလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ခေါ်ဆိုသူ ID ကို မထိမိပါက လျစ်လျူရှုသွားသည်...
သြဂုတ် 3, 2015 မှာ 12: 30 AM
၎င်းကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအဖြစ် ကြိုမြင်နိုင်သော်လည်း A. ကလိုင်းယင့်က ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သို့မဟုတ် B. အသုံးပြုသူသည် စားသုံးသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ၎င်းကို အသုံးပြုမှုမှာ အလွန်အကျွံ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ယခု၊ သင်သည် C-suite သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအကောင့်များသို့ ရောင်းချနေပါက၊ ဒေသန္တရတည်ရှိမှုကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်မှုအရတော့ ဒီကိရိယာကို အရင်က (အဲဒီတုန်းက စားသုံးသူတွေဆီ ရောင်းချတဲ့) အနေအထားမှာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ယုံကြည်မှုက ဘယ်တော့မှ မဆုံးရှုံးခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုလိုသိနိုင်သောဖုန်းစနစ်အကြောင်း သူတို့ကိုပြောပြပြီး “တော်တော်လေး ပါးနပ်တယ်ဟုတ်လား” နဲ့အဆုံးသတ်မယ့် “မင်းတို့ဒေသခံတွေလား” တစ်ချိန်လုံး ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး တခစ်ခစ်ရယ်ကြပြီး အရောင်းခေါ်ဆိုမှုဖြင့် ဆက်သွားကြသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ ထိုအထူးလျှောက်လွှာတွင်ဖြေဆိုမှုနှုန်းသည် 400% ကျော်တိုးလာသည်။ 4x စီးပွားရေးပိတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများ။ ငါ အဲဒီ ထူးထူးခြားခြားတွေကို နေ့တိုင်း ငါယူမယ်။
သြဂုတ် 3, 2015 မှာ 10: 54 AM
Ryan သည် ကြားခံတိုင်းတွင် တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးသည့် လှည့်စားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများစွာ ရှိပါသည်။ မင်းက ထူးထူးခြားခြားပဲ၊ ငါဟာ ပရိတ်သတ်မဟုတ်သလို ကောင်းမွန်တဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ဒီလိုအရာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မယုံပါနဲ့။
6:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 15
၎င်းသည် 2009 Caller ID အက်ဥပဒေ၏ အမှန်တရားကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆမည် မဟုတ်ပါလား။
6:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 23
ကျွန်ုပ်သည် ရှေ့နေတစ်ဦးမဟုတ်သော်လည်း ခေါ်ဆိုသူ၏ အမှန်တကယ်တည်နေရာနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဧရိယာကုဒ်ကို အတင်းအကြပ် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းမှာ ဥပဒေကြောင်းအရ လိုအပ်ချက်ရှိနေသည်ဟု မထင်ပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင် မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာကို စဉ်းစားပါ… ကျွန်ုပ်သည် Las Vegas တွင် ရှိနေနိုင်ပြီး တစ်စုံတစ်ဦးကို ဖုန်းခေါ်ဆိုကာ “317” တွင် စာရင်းသွင်းထားဆဲဖြစ်သည်။